IS oo xarumo tababar ka furatay Libya. - BBC News Somali
IS oo xarumo tababar ka furatay Libya.
Image caption Dagaalyahanada Daacish
Kooxda IS ayaa waxa ay xarumo lagu tababarto ka sameysatay bariga dalka Libya, sida uu sheegayo madaxa ciidamada Mareykanka ee qaarada Afrika.
Gen David Rodriguez ayaa sheegay in ay jiri karto boqolaal dagaalyahanada Daacish ah in ay ku tababaranayaan xarumhaasi.
Waxa uu sheegay in xarumahaasi ay bilow yihiin, balse Mareykanku uu si taxadar ah ula socday sida ay isu soo tareysay.
Dalka Libya ayaa qalalaase uu ka taagnaa tan iyo markii xilka laga tuuray Muammar Gaddafi sanadkii 2011, waxaana xilligaasi wixii ka danbeeyay awoodda dalkaasi ku hardamayay qabaa’ilo, maleeshiyaad iyo ururo siyaasadeed.
Dhowr kooxood oo Islaamiyiin ah ayaa ku tartamaya awoodda bariga dalkaasi, iyadoo kooxa maleeshiyaad ah ay mardhow ku dhawaaqeen in ay daacad u yihiin kooxda Daacish.
Xirrirka kala dhaxeeya Suuriya.
Mar uu ka hadlayay magaalada Washington abracadii, ayaa Gen Rodriguez waxa uu sheegay in aysan weli cadeyn sida ay isugu dhow yihiin kooxaha latababarrayo iyo Daacish.
Weriyayaasha ayaa sheegaya in markii uu dhacay kacdoonkii xilka looga tuuray Gaddafi, in dagaalyahana badan ay ku biireen kooxaha maleeshiyaadka ah ee ka dagaalamaya guddaha Suuriya, waxaana la aaminsanyahay in qaar dagaalyahadaasi ka mid ah ay dib ugu soo laabteen dalka Libya.
Dowladda la doortay ayaa waxa lagala wareegay saddex magaalo oo waaweyn.
Benghazi, oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi, ayaa waxa ay ku jirtaa gacanta dagaalyahanada, iyadoo baarlamaanka dalkaasi ay aqoonsadeen beesha caalamkana uu hadda fadhigiisu yahay magaala xeebeedka Tobruk oo bariga dalkaasi dhacda.
Dalka Mareykanka ayaa horkacayay billihii u danbeeyay isbaheysi dhanka cirka ah oo looga soo horjeedo kooxda Daacish ee ku sugan dalalka Ciraaq iyo Suuriya.